बिदेशमा मजदुरी गरेर पाँच तोला घर लाँदा तस्करी देख्ने राज्य, ३३ किलो सुन भित्रिंदा किन मौन ? | Arthatantra.com
बिदेशमा मजदुरी गरेर पाँच तोला घर लाँदा तस्करी देख्ने राज्य, ३३ किलो सुन भित्रिंदा किन मौन ?
संसारभरी नेपाली बहादुर, इमानदारी, सहयोगी अनि दयालु भनेर परिचित भइराखेको बेला ३३ किलो सुन प्रकरणले नेपाललाई बेस्सरी धक्का दियको छ । कुनै यस्ता घटनाहरु हुन्छन् जुन घटनाको बारेमा बोल्दिन लेख्दिन भन्दा पनि आफैँलार्इ त्यो घटनाले भित्र भित्र डसिरहेको हुन्छ ।
म अहिले मेरो प्यारो मातृभुमी भन्दा लगभग ५११६ माइलको दुरिमा छु । नेपालमा सञ्चार जगतमा आउने अधिकांश समाचारहरु अध्ययन गर्ने गर्छु । अध्ययान पछि राम्रो समाचारले खुशी बनाउँछ नराम्रो समाचारले दुःखी बनाउँछ यो त मानविय गुण नै हो ।
हाम्रो देस जहाँ आर्थिक, सामाजिक अनि राजनैतिक अस्थिरताले कयौँ युवाहरुलार्इ दिन दिनै बलजफ्ती बिदेश तिर धकल्दै छ । गरिखाने वातावरण राम्रो होला भन्दा झन झन राजनैतिक अस्थिरता र गरिबी वृद्धि हुँदैछ । कर्णालीका जनता भोको पेट तड्पिराखेका छ्न, दार्चुला, मुगु र बाजुराका जनताले सिटामोल समेत पाउन कठिन छ ।
हरेक राष्ट्र हरेक दिन घुस प्रथा र घुस विरुद्ध लडाइँ लडिरहेको बेला हाम्रो देशमा तस्करी घुस प्रथा बढ्दो छ । जुन घटनाले युवाहरू, जो नेपालमा बसेर केही गर्छु अनि प्रबासी युवाहरू, जो प्रबासमा सिकेका सिपलाइ नेपालमा गएर लगाउँछु भन्ने युवाहरूलाई कस्तो सन्देश जाला येस्ता घटना ले !
साधरण मजदुर जो आफ्नो खुसिहरु बेच्दै बर्सौ बिदेशी भुमिमा मजदुरी गरेर नेपाल फर्कँदा आफन्त र परिवारलार्इ पाँच तोला सुन लाँदा तस्करी करार गर्न । तर ३३ किलो सुन बोकेर ल्याउने तस्करिले ११ पटक सुन तस्कर गरि ३ सय किलो भन्दा बढी अबैध सुन भित्राउँदा राज्य किन मौन बस्छ ?
एयरपोर्टमा कर्मचारीहरु राज्य र मन्त्रीहरूबाट संरक्षित छन । जस्ले तस्करीलाई खादा लगाएर स्वागत गर्द्छ । सामान्य मानिसलार्इ विभिन्न झमेला दिन्छ । जिम्मेवारी के हो ? मानवीयता के हो ? कर्तव्य के हो ? उनीहरु थाह नभए जस्तो गर्छ्न । प्रवेशमा जाँदा लग्ने चाउचाउ र चिउरा उनीहरुले तस्करी सम्झन्छ्न र कन्टेनरमा फाल्दिन्छ्न । नेपाल आउँदा बच्चालाई ल्याएको चक्लेट फुटाउँछ्न् । यो कत्तिको मानवियता हो ?
हुनत यो ३३ किलो सुन प्रकरणमा मिडियहरुले पुर्ब गृहमन्त्री र अर्थ मन्त्रीसम्म मुछिएको दावी गरेका छन । अपेक्षा गरौँ सत्य तथ्य केही समयमा दूधको दूध र पानीको पानी बनेर आउला ! भुपि सेरचनले भने जस्तो यो हल्ला हल्लाको देस नहोला ! अनि पृथ्वीनारायणले भने जस्तो घुस खाने र लिने दुबै देशका सत्रु हुन भनेर प्रमाणित होला ! यदि सहि हो भने उहाँहरुबाट देशको सुनौलो भविष्यको कसरी आस गर्न सकिन्छ ! होइन भने किन मिडियाले कुरा उठायो ? हुनत चोरले म चोर हुँ भन्ने केही अपवाद बाहेक अहिलेसम्मको इतिहास छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
२८ पुस २०७३
सरकारले गरेका हरेक निणए को बिरोध गर्ने हामि नेपालीको बानिनै परिसक्यो राम्रो होस या नराम्रो
आफनो पार्टीको सरकारले गरेका जस्तोसुकै निणय पनि राम्रो हुन्छ्न ……
चोरले चोर हु भनिसके तर कारबाही हुदैन हाम्रो नेपाल मा….. #साना माछा हरू# ….
अचम्म त यो पो लाग्छ कि अर्थ मन्त्री ले म त भुरा माछा हु ठूलो माछा अरु नै छन भनेर बक्तब्य दिदा पनि नेपाल सरकार मौन छ । उल्टा च्यानल मिलाउन प्रचण्ड दुबै नै लागे । यो कस्तो बिडम्बना….
आरोप लागेपछी नैतिकता को आधार मा राजीनामा दिनुपर्ने हो ? आरोप प्रमाणिात भयो भने त जेल जानू पर्छ हैन र कि नेपाली मन्त्री को कुनै नैतिकता नै छैन ?
लेखिका भ्रम मा पर्नु भय जस्तो छ / नेपाल मा प्रजातंत्र व लोकतंत्र छैन / अहिले को ब्यवस्था भनेको पहिलेको राजतन्त्र सहितको प्रजातंत्र फालेर अर्ध नव सामन्तवादी व्यवस्था ल्याइएको हो / यस्तो खालको ब्यवस्था मा कुरा चाही जनमुखी वा जनवादी को गरिन्छ / काम चाही नव सामन्त हरु को पक्षपोषण हुने किसिम ले गरिन्छ / यस्तो खालको ब्यबस्थामा जन हित का जनता लाइ भ्रम मा पॉर्न लाइ गरिन्छ जून लागि राजतन्त्र भन्दा पनि खतरनाक हुन्छ /
thula lai huda,sab Aankha band ki aru ko tauko ma jimma~hami janta lai huda yei ta ho yo bahek aru k nai Aas,garna sakincha ra yo desh bata(JAHA NARI KO NA IJJAT,KO BOLI NA SAMMAN~NA CHELI BETI KO KUNAI SURAKCHYA BIHANA KAAM MA GAKO GHAR NAAYE SAMMA DAR KO MENTALY TOUCHER~CHUTTAI )YESTO THAU MA PAILA SOCH BADALAU HOO DIMAG KO KIRA LAI MARAU ANI BALLA NAZAR SOCH DIMAG SATYEE GARNUSS SAB LAI YEUTAI KANUNN HO SOCHNUSS SAB SAMADHAN YEI BATA HUNCHA KHALTI NAHERAU AFU JASTAI ARU PNI CHAN YEHA TYO HERAU YEKPATAK???
Amrit kharel , london
यो लेख् मलाई साह्रै मन पर्‍यो !
हाम्राे देशका राजनितिक पटिहरु चाेरहुन ।केगरुन बिचराहरु सन्चार माध्यमलेनि जिउ जाेगाउनु छ ‘देखेकाे भरम भन्दा सुनेकाे र लेखाएकाे भरमन लेख्छन् ।
बिदेशमा ज्लाला मजदुरि गरेर घरपरिवारको लागि एकसरो लुगाकपडा लिदा भन्सारका ब्वाँसाहरुले थुत्छन र मनचाहिदो रकम असुलछन ।त्यत्रो मात्रामा तस्कर गरेर ल्याएको सुन भित्रिन दिंनु के नखाएर हुनसक्छ र? सर्बप्रथम भन्सारका चोरहरूलाई कडा कार्वाही हुनुपर्दछ।
सहि कुरा उठाउनु भयाे ।हाम्रो देशमा पुर्ब सेनानी साहाएक रथिकाे कुरा सुन्दा अब केही बाँकि रहेन छ ।देश जति भारतले चलाकाे छ नेपालमा नेता बनेर बस्नेहरु देशलुटेर अाफ्नाे भकारी भाेर्न लागेका छन ।जन्ता जति खाडीमा जान बाध्य छन देशमा राेजगारी केही छैन केही गर्छु भन्दा पनि गुन्डा गर्दी र चन्दा अातंकले केही गर्न दिदैनन् अनि के गर्नु त।
नेपालको राजनिती देख्दा यस्तो लाग्छ कि नेपाल कुनै राज्य हैन, नेपालमा कुनै शासन छैन, निती नियम छैन, नेपाल मात्र एउटा लुटतन्त्र भएको देश हो, जाहा गरीब निमुखा लाई लुटिन्छ र ठुलाबडालाई सम्मान गरिन्छ आफ्नो परिवार चलाउनको लागी बिदेशमा बर्षाउ पशिना बगाएर घरायसि प्रयोगकोलागी ५ तोला सुन लादा अपराधी ठहरिन्छ र एउटा मन्त्री ले ३३ किलो सुन तस्कारी गर्दा सम्मानकासाथ राजगद्दिमा राखिन्छ, यही हो नया नेपाल ??
हाम्रो देसमा ज्यानमाराहरु लाई त फासीको सजाय छैन हजुर यो त झन ३०० किलो सुनको कुरा हो २५० मुल्य बराबरको अदालत मुल्य तोक्ला केहि बर्ष सजाय अनि जमानामा छुतला कुरा सकियो ॥ नेपाको कानुन दैबले जानुन ???
नाट्टामा अध्यक्षका उम्मेदवार सिएन पाण्डेको यस्ता छन् योजना (भिडियोसहित) काठमाडौ । आसन्न अधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने लाईनमा रहेका नाट्टाका वर्तमान प्रथम उपाध्यक्ष […]
जापानमा विद्यार्थीहरुको डरलाग्दो चीत्कार ! देशको मेरुदण्ड भनेको युवाशक्ति हो, अर्थात युवाशक्ति देश निर्माणको मेरुदण्ड हो । यति […]
पर्यटन : आर्थिक समृद्धिको आधार मानव जीवनका अनेक अधिकारहरु मध्ये स्वतन्त्ररुपले हिँड डुल गर्न पाउने तथा एक स्थानवाट अन्य […]